ဥရောပ ချန်ပီယံတို့ အဖွင့် မလှပခဲ့တဲ့ နာပိုလီ ၂ – ၀ လီဗာပူး တို့ရဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ်မှ နှစ်ဘက် ကစားသမားတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကဲဖြတ်ခြင်း (Player Ratings)
လီဗာပူးရဲ့ ဥရောပ ဖလား ကာကွယ်မှုဟာ အရှုံးနဲ့သာ စတင် ခဲ့ရပြီး အန်ဖီးကလပ်ဟာ နာပိုလီ ကို အဝေးကွင်းမှာ ရှုံးနိမ့် သွားခဲ့ပါတယ်။ နှစ်သင်းစလုံး တိုက်စစ် အပြိုင် ဖွင့်ကစား ခဲ့တဲ့ပွဲ ဖြစ်တာကြောင့် ဂိုးသမားတွေနဲ့ ခံစစ် ကစားသမားတွေ အလုပ် များခဲ့ကြပြီး အဲရစ်မီရက် နဲ့ နာပိုလီ ခံစစ်မှုးတွေဟာ လီဗာပူးရဲ့ မာနေး ဆာလား ဖာမီနို တို့ တိုက်စစ်အတွဲကို ဂိုးမပေးရအောင် အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင် ခဲ့ကြသလို အက်ဒရီယန် ကလည်း မာတန်စ်ရဲ့ ပိတ်သွင်းမှုကို အကောင်းဆုံး လက်စွမ်းပြ ကာကွယ် သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တစ်ပွဲလုံး ကောင်းလာ ခဲ့တဲ့ လီဗာပူး ရဲ့ ခံစစ်မှာ ပွဲချိန် မိနစ် ၈၀ ကျော်မှာတော့ အမှားလုပ်မိခဲ့ပြီး ရောဘတ်ဆန်ဟာ ကာလီဟွန်ကို ပြစ်ဒဏ် ကျူးလွန်ခဲ့မှုကြောင့် နာပိုလီတို့ ပင်နယ်တီ ရခဲ့ပြီး မာတန်စ် ကပဲ အဆုံးသတ် ခဲ့တာပါ။ လီဗာပူးဟာ ဂိုးပြန်ရဖို့ အတွက် တိုက်စစ် ဆင်ရင်း တန်ပြန် တိုက်စစ်တွေ ပြန်မိ ခဲ့ကာ တော့တင်ဟမ် တိုက်စစ်မှုး လိုရန်တီဟာ လီဗာပူးရဲ့ ခံစစ် အမှားကနေ ဂိုးသွင်းယူ ခဲ့ပါတယ်။
ဒီပွဲစဉ်မှာ ၂ ဘက် ကစားသမား တွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေ ကတော့….
မီရက် – ၈
မာနေး ဆာလား တို့ရဲ့ ကန်သွင်းမှု တွေကို အကောင်းဆုံး လက်စွမ်းပြ ကာကွယ် ခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ ပထမဦးဆုံး ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲဦးထွက်မှာ တောက်ပ ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလော်ရန်ဇို – ၆
နောက်တန်းမှာ ကစားပုံ ကျစ်လစ် မာကျော ခဲ့ကာ အကောင်းဆုံး ဟန့်တားမှုတွေ လုပ်ပေး ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လုပ်အား ကောင်းကောင်း နဲ့ တိုက်စစ်ကိုလည်း လိုက်ပါ ပံ့ပိုး ပေးခဲ့ပါတယ်။
မာနိုလက် – ၆
၎င်းရဲ့ ရှင်းထုတ်မှု မသေသပ် ရာကနေ တဆင့် ဆာလားကို လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် အခွင့်အရေး ပေးခဲ့ ရပြီး ဂိုးသမား ကောင်းလို့သာ ဂိုးမပေး ခဲ့ရတာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဗဟို ခံစစ်မှာ ကောင်းမွန်တဲ့ ပိတ်ဆို့မှုတွေ လုပ်ပေး ခဲ့ပါတယ်။
ကူလီဘာလီ – ၇
အစပိုင်း မှာတော့ ဆာလား ရဲ့ လျှင်မြန်မှု အောက်မှာ ရုန်းကန် ရမှုတွေ ရှိခဲ့ ပေမယ့်လည်း ပွဲချိန် ကြာလာတာနဲ့ အမျှ အကောင်းဆုံး ဟန့်တားမှုတွေ နဲ့ လီဗာပူး တိုက်စစ်ကို တားဆီး ပေးခဲ့ပါတယ်။
မာရီယိုရူအီ – ၆.၅
သိပ်ပြီး စွန့်စား မကစား ခဲ့ပေမယ့်လည်း ဆာလား ကို ဘယ်တောင်ပံ ကနေ အခွင့်အရေး မရအောင် ကပ်ကစား နိုင်ခဲ့ပြီး လီဗာပူးကို ဂိုးပေးလိုက် နိုင်တဲ့ ဖြတ်တင်ဘော ကို အကောင်းဆုံး ဟန့်တား ခဲ့ပါတယ်။
ကယ်လီဂျွန် – ၇
ကွင်းလယ် အထိုင် နေရာကို ၀င်ကစား ခဲ့ရာမှာ ဘောလုံး ကိုင်ကစားပုံ ကောင်းမွန် လှပြီး မြင့်မားတဲ့ ခြေစွမ်း အဆင့်အတန်းကို ပြသ ခဲ့ပါတယ်။
အလန် – ၆.၅
လီဗာပူး ကွင်းလယ်လူတွေနဲ့ အပြိုင် ကွင်းလယ်မှာ လုပ်အား ကောင်းကောင်း နဲ့ ကစား ခဲ့ပြီး ခံစစ်ကို လိုက်ပါ ကူညီ ပေးနိုင် ခဲ့သလို ဘောလုံး ကိုင်ကစားပုံကလည်း အဆင့်မြင့် လှပါတယ်။
ဖာဘီယန် ရူအိစ် – ၆
အကောင်းဆုံး အခွင့်အရေး ၂ ကြိမ် ရရှိ ခဲ့ပြီး အက်ဒရီယန် လက်စွမ်းပြ ခဲ့လို့သာ ဂိုးမရ ခဲ့တာပါ။ တိုက်စစ်ကို လိုက်ပါ ပံ့ပိုးမှုတွေ ထိရောက် ခဲ့ပါတယ်။
အင်ဆစ်နီ – ၆
ဒီပွဲမှာ ခါတိုင်းလိုတော့ ဘောလုံး များများ စားစား ကိုင်ကစား ခဲ့ရခြင်း မရှိ ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် switch of play တွေ ကစားရမှာတော့ ကောင်းမွန် လှပြီး ဂိုးရနိုင်လောက်တဲ့ ဖြတ်တင်ဘော တစ်ကြိမ် လုပ်ပေး ခဲ့ပါတယ်။
မာတန် – ၇
ညာတောင်ပံ ကနေ လျှင်မြန်မှု ဘောလုံး စွမ်းရည်ကောင်းတွေကို အသုံးချကာ လီဗာပူး ခံစစ်ကို ခြိမ်းခြောက် ကစား နိုင်ခဲ့ပြီး ဂိုးရနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေး အချို့လည်း ရခဲ့ပါတယ်။
လိုဇာနို – ၆
အသင်းရဲ့ တိုက်စစ် ကစားသမားတွေနဲ့ ချိတ်ဆက် ကစားပုံ ကောင်းမွန် လှပြီး လီဗာပူး ခံစစ်ကို တောက်လျှောက် ခြိမ်းခြောက် ကစား သွားခဲ့ ပါတယ်။
လူစားဝင် – ဇီလင်စကီး ၆ ၊ လိုရန်တီ ၇ ၊ အဲလ်မက်စ် ၆
အက်ဒရီယန် – ၈
အစောပိုင်းမှာ အကောင်းဆုံး ၂ ဆင့် ကာကွယ်မှု လုပ်ပေး နိုင်ခဲ့သလို ဒုတိယပိုင်းမှာ မာတန်စ် ရဲ့ ပတ်သွင်းမှုကို ကမ္ဘာ့အဆင့် ကာကွယ်မှုနဲ့ လီဗာပူးကို ပွဲအတွင်းမှာ ဆက်ရှိ စေခဲ့ပါတယ်။
အလက်ဇန်းဒါးအာနိုး – ၇
ဗဟို ခံစစ်ထိ ၀င်ကာ အကောင်းဆုံး ဖျက်ထုတ်မှုတွေ လုပ်ပေး ခဲ့သလို အင်ဆစ်နီကိုလည်း ခြေစွမ်း မပြနိုင်အောင် ထိန်းချုပ် ကစား နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း မြင့်မားတဲ့ စွမ်းအင် နဲ့ တိုက်စစ်ကို လိုက်ပါ ပံ့ပိုး ပေးခဲ့ပါတယ်။
မာတစ် – ၇
ဘောလုံး ကိုင်ကစားပုံ တည်ငြိမ်မှု ရှိခဲ့ပြီး အရမ်း ကောင်းတဲ့ ခေါင်းတိုက် ဖျက်ထုတ်မှု တွေနဲ့ နာပိုလီ ကို ဂိုးမရအောင် တားဆီး ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဗန်ဒိုက် – ၈
ဒီပွဲ မှာတော့ အလုပ် အရမ်း များခဲ့ ပေမယ့် ထုံးစံအတိုင်း အမြင့်ဘောတွေ အသာရ ခဲ့သလို ခံစစ်ကြောင်းကိုလည်း အကောင်းဆုံး ဦးစား ကစား ခဲ့ပါတယ်။ နာပိုလီ ရဲ့ ဒုတိယ ဂိုးကတော့ ၎င်းရဲ့ အမှား သိပ်မကင်း ခဲ့ပါဘူး။
Liverpool’s Dutch defender Virgil van Dijk (L) defends against Napoli’s Mexican forward Hirving Lozano (Bottom Rear) as Liverpool’s Spanish goalkeeper Adrian grabs the ball during the UEFA Champions League Group E football match Napoli vs Liverpool on September 17, 2019 at the San Paolo stadium in Naples. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)
ရောဘတ်ဆန် – ၆
တိုက်စစ်ကို လုပ်အား ကောင်းကောင်း နဲ့ လိုက်ပါ ပံ့ပိုး ပေးခဲ့ ပေမယ့် ခံစစ်ပိုင်း ကစားပုံ လိုအပ်ချက် ရှိခဲ့ပြီး ၎င်းကြောင့်ပဲ ပင်နယ်တီ ခွင့်ပြု ခဲ့ရသလို နောက်တစ်ဂိုး မှာလည်း အမှား သိပ်မကင်း ခဲ့ပါဘူး။
ဖာဘင်ညို – ၈
ကွင်းလယ်ကြော ကနေ ခံစစ်ကို အကောင်းဆုံး ကာဗာ လုပ်ကစား သွားခဲ့ပြီး အရမ်း ကောင်းတဲ့ ဘောလုံး ဖျက်ထုတ်မှု တွေနဲ့ အသင်းကို ဘောလုံး ပြန်လည် ရယူပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒ့ါအပြင် ဘောလုံး ဖြန့်ဝေမှုတွေကိုလည်း ကောင်းစွာ လုပ်ပေး နိုင်ခဲ့ပြီး တကယ့် အရည်အသွေးကို ပြသ ခဲ့ပါတယ်။
မီနာ – ၆
မီနာ ရဲ့ ထုံးစံ အတိုင်း မယုံနိုင် လောက်အောင် ပေးဆပ် ကစားမှုနဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ လုပ်အားတွေကို ပြသ ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘောလုံးပေးပို့မှု အပိုင်းမှာတော့ လိုအပ်ချက် အချို့ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဟန်ဒါဆန် – ၇
ဆာလား အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ ဘောလုံး ပေးပို့မှုတွေ လုပ်ပေး သွားခဲ့ သလို ခံစစ်ပိုင်း အတွက်လည်း ကွင်းလယ် ကနေ ကောင်းမွန်တဲ့ ဟန့်တားမှု တွေနဲ့ ဘောလုံး ပြန်လည် ရယူ ပေးနိုင် ခဲ့ပါတယ်။
မာနေး – ၇
အခွင့်အရေးကောင်း တစ်ချို့ ရယူ နိုင်ခဲ့ပြီး ၎င်းရဲ့ လျှင်မြန်မှု ဘောလုံး စွမ်းရည်တွေဟာ လီဗာပူး ရဲ့ တိုက်စစ် အတွက် လက်နက်ကောင်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အစောပိုင်းဟာ ထက်မြက်တဲ့ ကစားပုံ ပြသခဲ့ပေမယ့် ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ ကစားပုံ ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ အခွင့်အရေး တစ်ချို့ ရခဲ့ပေမယ့်လည်း အဆုံးသတ်ပိုင်း တွေတော့ လိုအပ်ချက် ရှိခဲ့ကာ ဒုတိယပိုင်းမှာ အကောင်းဆုံး အခွင့်အရေး တစ်ကြိမ် ရခဲ့ပေမယ့် ဂိုးသမား လက်စွမ်းပြ သွားခဲ့လို့ ဂိုးမရ ခဲ့တာပါ။
ဖာမီနို – ၆
ကွင်းလယ်ထိ ဆင်းကာ အသင်းရဲ့ ကစားကွက်ကို ပံ့ပိုးပေး ခဲ့ပြီး ချိတ်ဆက် ကစားပုံတွေလည်း ကောင်းမွန် ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၎င်းရဲ့ final pass တွေကတော့ ခါတိုင်းလောက် ကောင်းခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။
လူစားဝင် – ၀ိုင်နယ်ဒန် ၆ ၊ ရှကီရီ ၆
ဥရောပ ခနျြပီယံတို့ အဖှငျ့ မလှပခဲ့တဲ့ နာပိုလီ ၂ – ၀ လီဗာပူး တို့ရဲ့ ခနျြပီယံလိဂျ ပှဲစဉျမှ နှဈဘကျ ကစားသမားတှရေဲ့ စှမျးဆောငျရညျကို အကဲဖွတျခွငျး (Player Ratings)
လီဗာပူးရဲ့ ဥရောပ ဖလား ကာကှယျမှုဟာ အရှုံးနဲ့သာ စတငျ ခဲ့ရပွီး အနျဖီးကလပျဟာ နာပိုလီ ကို အဝေးကှငျးမှာ ရှုံးနိမျ့ သှားခဲ့ပါတယျ။ နှဈသငျးစလုံး တိုကျစဈ အပွိုငျ ဖှငျ့ကစား ခဲ့တဲ့ပှဲ ဖွဈတာကွောငျ့ ဂိုးသမားတှနေဲ့ ခံစဈ ကစားသမားတှေ အလုပျ မြားခဲ့ကွပွီး အဲရဈမီရကျ နဲ့ နာပိုလီ ခံစဈမှုးတှဟော လီဗာပူးရဲ့ မာနေး ဆာလား ဖာမီနို တို့ တိုကျစဈအတှဲကို ဂိုးမပေးရအောငျ အကောငျးဆုံး စှမျးဆောငျ ခဲ့ကွသလို အကျဒရီယနျ ကလညျး မာတနျဈရဲ့ ပိတျသှငျးမှုကို အကောငျးဆုံး လကျစှမျးပွ ကာကှယျ သှားခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ တဈပှဲလုံး ကောငျးလာ ခဲ့တဲ့ လီဗာပူး ရဲ့ ခံစဈမှာ ပှဲခြိနျ မိနဈ ၈၀ ကြျောမှာတော့ အမှားလုပျမိခဲ့ပွီး ရောဘတျဆနျဟာ ကာလီဟှနျကို ပွဈဒဏျ ကြူးလှနျခဲ့မှုကွောငျ့ နာပိုလီတို့ ပငျနယျတီ ရခဲ့ပွီး မာတနျဈ ကပဲ အဆုံးသတျ ခဲ့တာပါ။ လီဗာပူးဟာ ဂိုးပွနျရဖို့ အတှကျ တိုကျစဈ ဆငျရငျး တနျပွနျ တိုကျစဈတှေ ပွနျမိ ခဲ့ကာ တော့တငျဟမျ တိုကျစဈမှုး လိုရနျတီဟာ လီဗာပူးရဲ့ ခံစဈ အမှားကနေ ဂိုးသှငျးယူ ခဲ့ပါတယျ။
ဒီပှဲစဉျမှာ ၂ ဘကျ ကစားသမား တှရေဲ့ စှမျးဆောငျရညျတှေ ကတော့….
မီရကျ – ၈
မာနေး ဆာလား တို့ရဲ့ ကနျသှငျးမှု တှကေို အကောငျးဆုံး လကျစှမျးပွ ကာကှယျ ခဲ့ပွီး သူ့ရဲ့ ပထမဦးဆုံး ခနျြပီယံလိဂျ ပှဲဦးထှကျမှာ တောကျပ ခဲ့ပါတယျ။
ဒီလျောရနျဇို – ၆
နောကျတနျးမှာ ကစားပုံ ကဈြလဈ မာကြော ခဲ့ကာ အကောငျးဆုံး ဟနျ့တားမှုတှေ လုပျပေး ခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ လုပျအား ကောငျးကောငျး နဲ့ တိုကျစဈကိုလညျး လိုကျပါ ပံ့ပိုး ပေးခဲ့ပါတယျ။
မာနိုလကျ – ၆
၎င်းငျးရဲ့ ရှငျးထုတျမှု မသသေပျ ရာကနေ တဆငျ့ ဆာလားကို လှတျလှတျကြှတျကြှတျ အခှငျ့အရေး ပေးခဲ့ ရပွီး ဂိုးသမား ကောငျးလို့သာ ဂိုးမပေး ခဲ့ရတာပါ။ ဒါပမေယျ့လညျး ဗဟို ခံစဈမှာ ကောငျးမှနျတဲ့ ပိတျဆို့မှုတှေ လုပျပေး ခဲ့ပါတယျ။
ကူလီဘာလီ – ရ
အစပိုငျး မှာတော့ ဆာလား ရဲ့ လြှငျမွနျမှု အောကျမှာ ရုနျးကနျ ရမှုတှေ ရှိခဲ့ ပမေယျ့လညျး ပှဲခြိနျ ကွာလာတာနဲ့ အမြှ အကောငျးဆုံး ဟနျ့တားမှုတှေ နဲ့ လီဗာပူး တိုကျစဈကို တားဆီး ပေးခဲ့ပါတယျ။
မာရီယိုရူအီ – ၆.၅
သိပျပွီး စှနျ့စား မကစား ခဲ့ပမေယျ့လညျး ဆာလား ကို ဘယျတောငျပံ ကနေ အခှငျ့အရေး မရအောငျ ကပျကစား နိုငျခဲ့ပွီး လီဗာပူးကို ဂိုးပေးလိုကျ နိုငျတဲ့ ဖွတျတငျဘော ကို အကောငျးဆုံး ဟနျ့တား ခဲ့ပါတယျ။
ကယျလီဂြှနျ – ရ
ကှငျးလယျ အထိုငျ နရောကို ၀ငျကစား ခဲ့ရာမှာ ဘောလုံး ကိုငျကစားပုံ ကောငျးမှနျ လှပွီး မွငျ့မားတဲ့ ခွစှေမျး အဆငျ့အတနျးကို ပွသ ခဲ့ပါတယျ။
အလနျ – ၆.၅
လီဗာပူး ကှငျးလယျလူတှနေဲ့ အပွိုငျ ကှငျးလယျမှာ လုပျအား ကောငျးကောငျး နဲ့ ကစား ခဲ့ပွီး ခံစဈကို လိုကျပါ ကူညီ ပေးနိုငျ ခဲ့သလို ဘောလုံး ကျိုငျကစားပုံကလညျး အဆငျ့မွငျ့ လှပါတယျ။
ဖာဘီယနျ ရူအိဈ – ၆
အကောငျးဆုံး အခှငျ့အရေး ၂ ကွိမျ ရရှိ ခဲ့ပွီး အကျဒရီယနျ လကျစှမျးပွ ခဲ့လို့သာ ဂိုးမရ ခဲ့တာပါ။ တိုကျစဈကို လိုကျပါ ပံ့ပိုးမှုတှေ ထိရောကျ ခဲ့ပါတယျ။
အငျဆဈနီ – ၆
ဒီပှဲမှာ ခါတိုငျးလိုတော့ ဘောလုံး မြားမြား စားစား ကိုငျကစား ခဲ့ရခွငျး မရှိ ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ switch of play တှေ ကစားရမှာတော့ ကောငျးမှနျ လှပွီး ဂိုးရနိုငျလောကျတဲ့ ဖွတျတငျဘော တဈကွိမျ လုပျပေး ခဲ့ပါတယျ။
မာတနျ – ရ
ညာတောငျပံ ကနေ လြှငျမွနျမှု ဘောလုံး စှမျးရညျကောငျးတှကေို အသုံးခကြာ လီဗာပူး ခံစဈကို ခွိမျးခွောကျ ကစား နိုငျခဲ့ပွီး ဂိုးရနိုငျတဲ့ အခှငျ့အရေး အခြို့လညျး ရခဲ့ပါတယျ။
လိုဇာနို – ၆
အသငျးရဲ့ တိုကျစဈ ကစားသမားတှနေဲ့ ခြိတျဆကျ ကစားပုံ ကောငျးမှနျ လှပွီး လီဗာပူး ခံစဈကို တောကျလြှောကျ ခွိမျးခွောကျ ကစား သှားခဲ့ ပါတယျ။
လူစားဝငျ – ဇီလငျစကီး ၆ ၊ လိုရနျတီ ရ ၊ အဲလျမကျဈ ၆
အကျဒရီယနျ – ၈
အစောပိုငျးမှာ အကောငျးဆုံး ၂ ဆငျ့ ကာကှယျမှု လုပျပေး နိုငျခဲ့သလို ဒုတိယပိုငျးမှာ မာတနျဈ ရဲ့ ပတျသှငျးမှုကို ကမ်ဘာ့အဆငျ့ ကာကှယျမှုနဲ့ လီဗာပူးကို ပှဲအတှငျးမှာ ဆကျရှိ စခေဲ့ပါတယျ။
အလကျဇနျးဒါးအာနိုး – ရ
ဗဟို ခံစဈထိ ၀ငျကာ အကောငျးဆုံး ဖကျြထုတျမှုတှေ လုပျပေး ခဲ့သလို အငျဆဈနီကိုလညျး ခွစှေမျး မပွနိုငျအောငျ ထိနျးခြုပျ ကစား နိုငျခဲ့ပါတယျ။ ထုံးစံအတိုငျး မွငျ့မားတဲ့ စှမျးအငျ နဲ့ တိုကျစဈကို လိုကျပါ ပံ့ပိုး ပေးခဲ့ပါတယျ။
မာတဈ – ရ
ဘောလုံး ကိုငျကစားပုံ တညျငွိမျမှု ရှိခဲ့ပွီး အရမျး ကောငျးတဲ့ ခေါငျးတိုကျ ဖကျြထုတျမှု တှနေဲ့ နာပိုလီ ကို ဂိုးမရအောငျ တားဆီး ပေးခဲ့ပါတယျ။
ဗနျဒိုကျ – ၈
ဒီပှဲ မှာတော့ အလုပျ အရမျး မြားခဲ့ ပမေယျ့ ထုံးစံအတိုငျး အမွငျ့ဘောတှေ အသာရ ခဲ့သလို ခံစဈကွောငျးကိုလညျး အကောငျးဆုံး ဦးစား ကစား ခဲ့ပါတယျ။ နာပိုလီ ရဲ့ ဒုတိယ ဂိုးကတော့ ၎င်းငျးရဲ့ အမှား သိပျမကငျး ခဲ့ပါဘူး။
ရောဘတျဆနျ – ၆
တိုကျစဈကို လုပျအား ကောငျးကောငျး နဲ့ လိုကျပါ ပံ့ပိုး ပေးခဲ့ ပမေယျ့ ခံစဈပိုငျး ကစားပုံ လိုအပျခကျြ ရှိခဲ့ပွီး ၎င်းငျးကွောငျ့ပဲ ပငျနယျတီ ခှငျ့ပွု ခဲ့ရသလို နောကျတဈဂိုး မှာလညျး အမှား သိပျမကငျး ခဲ့ပါဘူး။
ဖာဘငျညို – ၈
ကှငျးလယျကွော ကနေ ခံစဈကို အကောငျးဆုံး ကာဗာ လုပျကစား သှားခဲ့ပွီး အရမျး ကောငျးတဲ့ ဘောလုံး ဖကျြထုတျမှု တှနေဲ့ အသငျးကို ဘောလုံး ပွနျလညျ ရယူပေးခဲ့ပါတယျ။ ဒ့ါအပွငျ ဘောလုံး ဖွနျ့ဝမှေုတှကေိုလညျး ကောငျးစှာ လုပျပေး နိုငျခဲ့ပွီး တကယျ့ အရညျအသှေးကို ပွသ ခဲ့ပါတယျ။
မီနာ ရဲ့ ထုံးစံ အတိုငျး မယုံနိုငျ လောကျအောငျ ပေးဆပျ ကစားမှုနဲ့ ပွငျးထနျတဲ့ လုပျအားတှကေို ပွသ ခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဘောလုံးပေးပို့မှု အပိုငျးမှာတော့ လိုအပျခကျြ အခြို့ ရှိခဲ့ပါတယျ။
ဟနျဒါဆနျ – ရ
ဆာလား အတှကျ ကောငျးမှနျတဲ့ ဘောလုံး ပေးပို့မှုတှေ လုပျပေး သှားခဲ့ သလို ခံစဈပိုငျး အတှကျလညျး ကှငျးလယျ ကနေ ကောငျးမှနျတဲ့ ဟနျ့တားမှု တှနေဲ့ ဘောလုံး ပွနျလညျ ရယူ ပေးနိုငျ ခဲ့ပါတယျ။
မာနေး – ရ
အခှငျ့အရေးကောငျး တဈခြို့ ရယူ နိုငျခဲ့ပွီး ၎င်းငျးရဲ့ လြှငျမွနျမှု ဘောလုံး စှမျးရညျတှဟော လီဗာပူး ရဲ့ တိုကျစဈ အတှကျ လကျနကျကောငျး ဖွဈခဲ့ပါတယျ။
အစောပိုငျးဟာ ထကျမွကျတဲ့ ကစားပုံ ပွသခဲ့ပမေယျ့ ဒုတိယပိုငျးမှာတော့ ကစားပုံ ကသြှားခဲ့ပါတယျ။ အခှငျ့အရေး တဈခြို့ ရခဲ့ပမေယျ့လညျး အဆုံးသတျပိုငျး တှတေော့ လိုအပျခကျြ ရှိခဲ့ကာ ဒုတိယပိုငျးမှာ အကောငျးဆုံး အခှငျ့အရေး တဈကွိမျ ရခဲ့ပမေယျ့ ဂိုးသမား လကျစှမျးပွ သှားခဲ့လို့ ဂိုးမရ ခဲ့တာပါ။
ဖာမီနို – ၆
ကှငျးလယျထိ ဆငျးကာ အသငျးရဲ့ ကစားကှကျကို ပံ့ပိုးပေး ခဲ့ပွီး ခြိတျဆကျ ကစားပုံတှလေညျး ကောငျးမှနျ ခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ၎င်းငျးရဲ့ final pass တှကေတော့ ခါတိုငျးလောကျ ကောငျးခဲ့ခွငျး မရှိခဲ့ပါဘူး။
လူစားဝငျ – ၀ိုငျနယျဒနျ ၆ ၊ ရှကီရီ ၆
ဧပွီ ၁၀ ရကျနမှေ့ပွိုငျဘကျဟောငျးနဲ့ ခနျြပီယံလုပှဲ ဆငျနှဲတော့မယျ့ မွနျမာ့စပါးအုံး အောငျလအနျဆနျး
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈခွိမျးခွောကျခံရမှုအလှနျ မှေးရပျမွမှော သာယာနတေဲ့ စီရျောနယျဒို